Bangkok ~ Journey-Assist - Review. Inona no hojerena ary inona no andrasana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Bangkok
Bangkok dia renivohitr'i Thailand. Tanàn-dehibe iray (mponina manodidina ny 6 tapitrisa) fantatra ho isan'ireo trano manankarena miroborobo, feno ny alina. Io koa dia iray amin'ireo tanàna mitombo haingana indrindra any Azia Atsimo Atsinanana, ao anatin'izany ny toekarena.
Matetika ny mpizaha tany dia mitsidika Bangkok dia tsy io ho toerana lehibe miala voly kely, fa raha vantany vao iray amin'ireo teboka ny lalan'izy ireo any Thailand.
Raha ny fitsipika, lasa renivohitra voalohany sy farany amin'ny lalana toy izany ny renivohitra Thai, satria ny seranam-piaramanidina lehibe any Thailand dia: Don Muang и Suvarnabhumi.
Ny safidy tsara indrindra dia ny mandany andro vitsivitsy farany amin'ny dia ao Bangkok. Eto ianao dia afaka mifankahita amin'ireo mpijery ary mividy be dia be hody any an-trano miaraka amin'ny valizy feno (miaraka amin'izay tsy tokony hitondranao enta-mavesatra be mandritra ny dia - dia manidina avy hatrany ianao).
Inona no tokony hatao any Bangkok
Ity tanàna ity dia manana fotodrafitrasa tsara novokarina ho an'ny mpizahatany. Ny fisintonana sy ny fialam-boly isan-karazany dia misy amin'ny habetsahan'ny ampy. Bangkok dia manana hotely maro amin'ny kilasy isan-karazany, misy fitsangatsanganana isan-karazany. Ny faritra mpizaha tany tsara indrindra dia ny Khaosan, Siam, Pratunam, Silom, Sukhumvit. Ao amin'ny tsirairay amin'izy ireo dia misy làlana fizahan-tany malaza na quarters. Ankoatr'izay, ny distrika tsirairay dia hafa noho ny an'ny hafa, manana ny mampiavaka azy.
Hahafantatra haingana ny toerana mpizahatany amin'ity tanàna ity ianao, dia afaka roa andro feno. Raha te hijerena ireo mpijery rehetra, fiantsenana feno sy fialamboly rehetra, dia mendrika ny mandany herinandro mandritra ny herinandro. Ny tsy ho eto mandritra izao fotoana izao dia azo antoka fa tsy hahomby.
Mazava ho azy, tsy misy fialan-tsasatra amoron-dranomasina any Bangkok, satria tsy eo amin'ny morontsiraka ny tanàna. Na izany aza, raha tiana dia azo tanterahina ny mety ho tonga amin'ny toerana fandraisam-bahiny an-dranomasina akaiky ny renivohitra - Hua Hin, Bang Saen, Pattaya, ary Si Racha ao anatin'ny iray andro.
Toerana sy toetrany
Ny antony manintona no antony voalohany mahatonga an'i Bangkok ho tonga any Bangkok. Betsaka kokoa ny eto amin'ity tanàna ity raha oharina amin'ny renivohitr'i Azia Atsimo Atsinanana. Anisan’ireny ny trano tena tsara tarehy, ny tranombakoka maro, ny valan-javaboary, ny trano misy trano moderina ary mahaliana. Toerana mahaliana maro no hita eo akaikin'ny Bangkok. Raha mitsidika azy ireo ianao dia afaka miala ny tanàna amin'ny maraina ary miverina amin'ny hariva amin'ny androtr'io andro io.
Ny zavatra manintona ao Bangkok:
Tempolin'i Buddha Emerald
Address: Na Phra Lan Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailandy
telefaonina: + 66 2 224 3290
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/JgTPGpTKHz9QXjpF7
Lapan'ny Royal Royal Royal (Museum ao amin'ny trano fonenana taloha)
telefaonina: + 66 2 623 5500
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/t6gCdX8NLZe5hhA2A
Tempolin'ny Buddha ny Reclining any Bangkok
Address: 2 Sanam Chai Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailandy
telefaonina: + 66 2 226 0335
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/Gfk2tnN6LWauq8qs7
Tempolin'ny Andro maraina (Wat Arun)
Address: Thanon Wang Doem, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 158, Thailandy
telefaonina: + 66 2 891 2185
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/ck67cuzujBqKmTin9
Temple of the Golden Buddha (Wat Tri Meath)
Temple of the Golden Buddha in Bangkok
Buddha nipetraka. 5,5 taonina, atsofoka volamena madio, misy maso avy amin'ny perla sy safira Thai.
telefaonina: + 66 89 002 2700
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/suKqnmrnUT2xa64c9
Tempolin'i Sathat. Wat suthat
Address: 146 Bamrung Mueang Rd, Wat Ratchabophit, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailandy
telefaonina: + 66 2 622 2819
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/RhQJZyNA4p7CWmvw8
Temple of the Golden Mountain (Wat Saket)
Address: 344 ถนน บริพัตร Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100, Thailandy
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/n1QGFfgcqiAoAMu88
National Museum of Bangkok. Thailand Treasure Collection
Address: Na Phra That Alley, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, Thailandy
telefaonina: + 66 2 224 1333
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/99Hg8S8MVCEcLQjq9
Ary maro kokoa!
Ireo mpankafy fialamboly mahafinaritra dia afaka mahita any Bangkok ary tsy lavitra azy io dia zoo, aquarium, zaridaina ary toerana maro hafa hahafinaritra sy fialana mahasoa.
Ity tanàna ity koa dia manana ny zava-drehetra amin'ny alina: trano fisakafoanana maro izay misokatra amin'ny hariva, discotheques miaraka amin'ny fitaovana maoderina, trano fisotroana isan-karazany amin'ny tsiro rehetra.
Ny ivon'ny fialam-boly "olon-dehibe" ao Bangkok - Lalana Patpong. Na izany aza, tsy io mihitsy no toerana tokana misy ao an-tanàna ahafahanao mahita bara hidiran'ny zazavavy eo an-toerana sy ny ankizilahy aza.
Fiantsenana any Bangkok
Bangkok no tanàna miantsena mora indrindra ao Thailand. Ireto ny tranobe lehibe indrindra tsy eto amin'ity firenena ity ihany, fa manerana an'i Azia Atsinanana, manolotra akanjo amin'ny marika rehetra eran'izao tontolo izao sy ny elektronika maoderina indrindra.
Ao amin'ny fivarotana tsy miankina maro dia afaka mahita ny landihazo Thai, akanjo namboarin'ireo mpanao asa tanana manokana, souvenir, fanamboarana trano, haingon-trano, sary hoso-doko ary antikantaly.
(Antsipirihany momba ny fitateram-bahoaka any Thailand)
Any Bangkok, ny lozam-pifamoivoizana be dia be matetika, fa ny fitateram-bahoaka an-tanàna, ao ny lalamby, Sky Train (somary lalamby ambony), lalan-bus sy fitaterana rano ao anaty renirano. Chaopraya sy lakandrano maro no mampitony ny renivohitra Thai. Mazava ho azy fa misy taxi ihany koa, ary somary tsy lafo ny tarifany. Ankoatra ny taxi mahazatra dia azonao atao ny mampiasa ny Grab-taxi application, saingy tsy niasa tany Thailandy hatramin'ny taona 2018 i Uber.
Ny fiara fitateram-bahoaka mora indrindra indrindra any Bangkok no fiara fitateram-bahoaka. Manomboka amin'ny 6 baht ny vidin'ny dia. Tsy tokony hanelingelina anefa ny fampiasana ireo fiara fitateram-bahoaka, satria maro ny lalana, ary matetika tsy afaka mitodika any amin'ireo mponina eo an-toerana hangataka fanampiana satria ny ankamaroany dia tsy miteny anglisy mihitsy. Amin'ity tranga ity, matetika ny fiara fitateram-bahoaka no lalana tokana mankany amin'ny toerana mety, satria ny lalamby (na ambanin'ny tany sy ambanin'ny tany) dia tsy mandrakotra an'i Bangkok avokoa.
Ny ankamaroan'ny tsipika metro dia mihazakazaka amin'ny faritra maoderina, ary, ohatra, ao amin'ny Saikinosy Ratanakosin manan-tantara, izay mahasarika ny saina, tsy misy tokan-trano tokana. Na izany aza, ny lalamby no lalana haingana indrindra handehanana any Bangkok.
Sarintany metro Bangkok
sarintany metro tany Bangkok
Sakafo ao Bangkok
Na aiza na aiza ianao dia afaka mahita ireo kianja izay mivarotra sakafo haingana, ary koa ny trano fisotroana kafe, toeram-pitsaboana amin'ny toeram-pivarotana sy fisakafoanana. Nahandro 50 baht ny vary laoka miaraka amin'ny akoho amam-bilia. Mba hisakafo any amin'ny trano fisakafoanana mora vidy dia mila 100 baht farafahakeliny ianao. Ny sakafo hariva amin'ny trano fisakafoanana malaza kokoa dia misy vidiny 200 baht. Ireo mpivarotra sakafo haingana, tsy toy ny mpivarotra eny an-tsena sy ny fivarotana, dia tsy manaiky, fa mazàna dia tsy mampiakatra vidin'ny vahiny.
Ny anarana feno an'i Bangkok no anarana tanàna lava indrindra eto an-tany: Krung Tep Mahanakhon Amona Rattanakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Phop Nopparat Ratchathani Buriram Udomratchanivet Mahasatan Amona les Piments Avatan Sathit Sakkathattiyya Vitsanukam Prasit (Krung Thep Mahanakhon Amona Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amona Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit), ny dikan'io "Ny tanànan'ny anjely, ny tanàn-dehibe, ny tanàna - ny harena mandrakizay, ny tanànan'ny andriamanitr'i Indra, renivohitr'izao tontolo izao, feno vato sarobidy, tanàna sambatra, feno be dia be, lapa lehibe iray mitovy amin'ny trano fonenan'Andriamanitra, izay nanjakan'ny andriamanitra vao namboarina indray, tanàna nomena an'i Indra ary nanangana Vishnukarnom.
Na izany aza, ny mponina ao Bangkok dia miantso ny tanànany tsotra hoe Krung Tep ("tanànan'ny anjely").
Ity Buddha volamena dimy taonina ity dia mety ho tahirim-bolam-bolan'ny fifanakalozana any ivelany any Thailand 🙂